Tinye ihe Iframe na-emebi saịtị gị | Martech Zone
Ezigbo enyi m Kevin Mullett gwara m mgbe ọ pịrị na otu nke njikọ m na Twitter, a kpọtara m na saịtị m na nnukwu popup na koodu ịdọ aka ná ntị ọjọọ. Nke ahụ ezuola ịtụ mmadụ ụjọ, yabụ amalitere m ịme ule. Ọ na-efesa na ọ dịghị ihe dị njọ na saịtị m - nsogbu bụ njikọ ahụ.
Njikọ ahụ na saịtị ọzọ mepụtara ogwe ngwaọrụ n'elu nke na-agba ndị mmadụ ume ka ị pịa njikọ njikọ obi ọjọọ, mgbe ị na-ebudata saịtị m na iframe n'okpuru. Nye ọtụtụ ndị mmadụ, ọ nwere ike ịdị ka saịtị m na-agbasa koodu ọjọọ. N'ikwu eziokwu, ana m elelị saịtị ọ bụla nke na-ebu saịtị m n'ime iframe, n'ihi ya, m mere ihe ọ bụla geek ga-eme… Ejiri m ihe mgbochi.
Koodu ahụ dị mfe. Debe usoro usoro koodu a na ngalaba isi nke ibe gị:
Tags: codeiframeiframe emebiogwe ngwaọrụ
Chọọ ndị na-emetụta ya na obere nnụnụ